Hotel ampiasaina ny Mirror Defogger amin'ny UL certificate China Manufacturer
Description:Fanamafisana ny Miralenta,Hotel Mirror Defogger,Hotely Mirror Defogger
Home > Products > Home Appliance Heating Film > Mirror Heating Elements > Hotel ampiasaina ny Mirror Defogger amin&#39;ny UL certificate
Tsy misy afa-tsy ao amin'ny toeram-pitsaboana na trano fandraisam-bahiny, amin'izao fotoana izao dia afaka mankafy ny fahitana ny fitaratra tsy misy rano ianao na aiza na aiza tianao. Mafana tokoa ny famolavolanao ny fitaratra mandeha amin'ny herinaratra, mampitony ny hafanana manerana ny gorodona mba hisorohana ny tsy fahampian-tsakafo mandritra ny fandroana na fanasana. Ity kapila fitaratra ity dia vonona ny hametraka amin'ny endrika sy ny habe. Ny fanamafisan'endriky ny sela dia ahafahana mampihatra mora foana amin'ny fitaratra rehetra misy rindrina ao anatin'ny minitra vitsy monja.
3. Fampiharana amin'ny fitaovana an-trano, trano bozaka, efitrano sauna, fitsaboana fanafody fitsaboana, biby fiompy fikarakarana sakafo, rafitra fikajiana ranomandry, rafi-piteran'ny ety, fitaovana elektrônika ary entana an-tsokosoko.
4. Amin'ny PVC teflon roa fototra, 2 x 0,75 mm square, ny lavany ivelany ivelany 700 mm + 10 -0
Fanamafisana ny Miralenta Hotel Mirror Defogger Hotely Mirror Defogger Fanamainana haingana Fanadiovana ny vilany Fanamboarana fantsona Mat Fanaraha-maso ny alika Nampiasaina ny ririnina